David Cameron: Saddex sababood ayaan u mamnuucnay qaadka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
David Cameron: Saddex sababood ayaan u mamnuucnay qaadka
24th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
London – Mareeg.com: Laga bilaabo maanta oo ah 24-ka June 2014 qof kasta oo ku sugan Ingiriiska ee Qaad heysta ama qeybiya oo iibiya wuxuu jebiyey sharciga, sidaas waxaa lagu yiri war kazoo baxaay xafiiska R/wasaaraha dalkaas David Cameron.
Go’aankaan waxaa so weyn usoo dhaweeyey inta badan dadka UK, gaar ahaan dumarka, aabayaasha, carruurta iyo walaalaha qaar ka mid ah ehaladoodu qaadka cuni jireen. Sidaan waxaa sidoo kale lagu yiri qoraalka uu soo saaray Cameron.
R/wasaaraha dalka Britain, David Cameron ayaa sheegay in la soo saaray sharciga mamnuucaya qaadka kadib markii sanado badan dowladda arrinkaas laga codsanayey.
Saddex sababood ayuu David Cameron sheegay in dowladdiisu u manuucday qaadka, wuxuuna yiri:
Sababta 1-aad: “Marka ugu horreysa waxaa waajib naga saaranyahay inaan bulshada ka ilaalino wax kasta oo khatar ku ah, Maadooyinka qaadku ka kooban yahay ee cathine & cathinone maamnuuc ayay ka yihiin dalkan, waxaana ka walaacsanahay in khatar weyn ku dhaceyso dadka qaadka cuna”.
David Cameron ayaa xusay in qiimeyn lagu sameeyey Soomaalida ku nool Britain ay muujineyso in wax ku dhow kala bar Soomaalida dalkaas ay qaadka cunaan, sidoo kalana 10 kasta ee Soomaali ah oo midi qaadka cuno, arrintaasin keentay burburka qoysaska, baagamuuddo, deymo, dambiyo iyo xiriir ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaha.
Qaadka oo ay cunaan bulshooyinka Soomaalida, Kenyaanka iyo Itoobiya ayuu raysulwasaare David Cameron yiri “Intii hore kaku ekaado”.
Cameron ayaa intaa ku daray iney dhageysteen soo jeedinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkiisa, wuxuuna dhanka kale xusay iney ku dedaalayaan dib u dhiska Soomaaliya.
Raysul wasaaraha Britain ayaa cadeeyey in dalkiisu £80 million ku bixinayo mashaariicda gargaarka Soomaaliya sida: Quudinta carrurta baahan iyo shaqo abuur.
Sababta 2-aad: “Haddaan nahay siyaasiyiin waxaa waajib naga saran yahay inaan dadka ku caawino si ay noloshooda u dabartaan, arrintaas waa mabda’a xisbiga Muxaafidka ah,” ayuu yiri David Caemron.
“Dadka sida adag u shaqeysta waxey awoodi karaan iney gaaraan waxyaabaha ay raadinayaan, annaguna hadaan dowladda nahay wax kasta ayaan sameyneynaa, shaqo abuurid, kobcinta waxbarashada, canshuur dhimis, arrimahaas oo dadka ku garab gelaya iney iney guul gaaraan, hase ahaatee kuwa qaadka cuna habeenkii oo dhan ma shaqeyn karayaan maalintii” ayuu sidoo kale yiri Raysulwasaare David Cameron.
“Dabcan, waxaa jira dadka qaar oo leh ‘Maaheyn shaqada xukuumadda iney arrimahaan oo kale farageliso’, waxaana leeyahay ‘Wey khaldan yihiin, maxaa yeelay hadii uu jiro wax khatar ku ah bulshada iyo qoysaskooda haba yaraadaanee boos kuma lahan Britain” ayuu sidoo kale David Cameron.
Sababta 3-aad: “Britain waxey si deg deg ag u noqneysay caasimadda laga tahriibiyo qaadka ee Yurub, maandooriyahan dhamaan qaaradda waa laga mamnuucay, sidoo kale waxaa laga mamnuucay Mareykanka iyo Canada” ayuu David Cameron yiri.
“Bishii lasoo dhaafay, warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa tuseysa in dalalka mamnuucay qaadka ay ku warbixyeen iney sii kordhayaan Itoobiyaanka iyo Kenyanka qaadka ka tahriibiya UK ee u gudbiya dallkooda, arrintaasna UK ma dooneyso iney qeyb ka sii ahaato, waxaana dooneynaa iney joojino” ayuu sidoo kale yiri Raysulwasaaraha Britain.
“Saddexdaas sababood ee waaweyn ayaa sax ka dhigaya inaan mamnuucno qaadka, waxaana dowladdu u taagan tahay in dadku helaan amni, deganaasho saameysa dhamaan qeybaha noloshooda iyo in cudurkaan la suuliyo” ayuu hadalkiisa kusoo gebagbeeyey Raysulwasaaraha UK, David Cameron.
Sharciga maanta ka dhaqan galay dalka Britain ayaa sameyn xoog leh ku yeelan doona Soomaali badan oo ku miirbeelay cunista qaadka, wuxuu sidoo kale saameyn dhaqaale ku yeelan doonaa dalka Kenya oo qaadka ugu badan u iibgeyn jiray dalka Britain.
About A warsame	9752 Articles
Daacish oo qabsatay warshadda ugu weyn ee sifeysa shidaalka Ciraaq
Gunmen kill five in fresh Kenya coast attack
Guri’el Bloodbath: A Socio-Political Symbol of Everything Wrong With Hawiye in Somalia c
Mareeg.com- Since the fall of the bloody clannish dictatorship of Siad Barre in 1991, the Hawiye people have experienced profound challenges in trying to regain Read More